Kenya iyo Konfur Africa oo heshiisyo dhowr ah kala saxiixday – The Voice of Northeastern Kenya
Kenya iyo Konfur Africa oo heshiisyo dhowr ah kala saxiixday
Star FM October 11, 2016
Dowlada Kenya iyo Konfur Africa ayaa kala saxiixday arimo dhowr ah oo lagu doonayo in lagu xoojiyo xiriirka saaxibtinimo ee u dhaxeya labada dowladood.
Madaxweynaha South Africa oo booqasha sedex maalin qaadaneyso ku joogo dalka ayaa kulan laba geesod ah waxaa uu la qaatay dhigiisa dalkan Kenya Uhuru Kenyatta taasoo horseeday in heshisyadaasi la gaaro.
Madaxweynaha martida loo ahaa ee dalkan Kenya ayaa sheegay waxyaabaha ay qalinka kuwada duugen isaga iyo Mr Zuma ay tahay kor u qaadista ganacsiga labada dal iyo qodoba kale oo waxtar u leh shacabka labada wadan sida qafiifinta xeerka socdaalka.
Kenyatta ayaa dhanka kale waxaa uu ka dhawaajiyay in labada dowladooda ay kawada hadleen oo ay kawada heshiiyen arimaha amniga gaar ah iskaashi iyo wada shaqeyn dhaxmarta laamaha amaanka ee Kenya iyo South Africa sida arimaha sirdoonka si looga hortago dhaqdhaqaaqa lidiga ku ah amniga.
Dhanka kale Madaxweynaha Konfur Africa oo isagana ka hadlay shir jaraa’id oo ay labada madaxweyne kuwada qabteen aqalka madaxtooyada ayaa dhankiisa sheegay in ganacsiga labada wadan uu sare u kacay maadama ku dhawaad 60 shirkadooda ay hadda ka howlgalayaan gudaha dalkan Kenya.
← Shirkadda Samsung oo macaamiisheeda ka dalbatay in ay damiyaan taleefoonka Galaxy Note 7
Duliyayaasha diyaaradaha qaranka oo ku goodiyay shaqo joojin qaran →
xildhibaanad ka hadashay kulanka baarlamaanka soomaliya April 24, 2019
Waxaa lagu soo warramayaa inuu isbadal ku yimid ceelasha biyaha ee magaalada kismaayo. April 24, 2019
15 qof oo ku dhimatay qarax ka dhacay wadanka Suuriya April 24, 2019
Madaxweynaha Siri Lanka oo isbadal ku sameynaya madaxda ciidamada dalkiisa April 24, 2019
Galbeedka Wajeer oo bari lagu qabanaya doorasho ku celis ah . April 24, 2019
Booliska Sri Lanka oo 18 qof u xiray qaraxyadii dhacay April 24, 2019
Abaanduulaha booliska oo badqabkooda u xaqiijiyay macalimiinta la tababarayo April 24, 2019
Madaxweynaha dalka iyo Raila Odinga oo berri shir uga qeyb galaya Shiinaha April 24, 2019
Xildhibaan doonaya in xubnaha baarlamaanka aan lagu saleyn sinnaan jinsiyadeed April 24, 2019
xildhibaanad ka hadashay kulanka baarlamaanka soomaliya
Waxaa lagu soo warramayaa inuu isbadal ku yimid ceelasha biyaha ee magaalada kismaayo.
15 qof oo ku dhimatay qarax ka dhacay wadanka Suuriya
Madaxweynaha Siri Lanka oo isbadal ku sameynaya madaxda ciidamada dalkiisa
Galbeedka Wajeer oo bari lagu qabanaya doorasho ku celis ah .
Booliska Sri Lanka oo 18 qof u xiray qaraxyadii dhacay
Abaanduulaha booliska oo badqabkooda u xaqiijiyay macalimiinta la tababarayo
Madaxweynaha dalka iyo Raila Odinga oo berri shir uga qeyb galaya Shiinaha
Xildhibaan doonaya in xubnaha baarlamaanka aan lagu saleyn sinnaan jinsiyadeed